I-Chamber & Oven Factory - I-China Chamber & Oven Manufacturers, Suppliers
I-DRK-GHP Electrothermal Constant Temperature Incubator(Entsha)
Kuyi-incubator yokushisa engaguquki efanelekela ucwaningo lwesayensi kanye neminyango yokukhiqiza izimboni njengezokwelapha nempilo, imboni yezokwelapha, i-biochemistry kanye nesayensi yezolimo yokutshalwa kwamagciwane, ukuvutshelwa kanye nokuhlola izinga lokushisa njalo.
DRK-BPG Vertical Blast Drying Oven Series
Ihhavini elivunguzayo eliqondile lilungele imikhiqizo ehlukahlukene noma izinto zokwakha kanye nezinto zikagesi, amathuluzi, izingxenye, i-elekthronikhi, ugesi kanye nezimoto, ezondiza, ezokuxhumana, amapulasitiki, imishini, amakhemikhali, ukudla, amakhemikhali, ihadiwe kanye namathuluzi esimweni sokushisa esingaguquki.
I-DRK-HTC-HC Humidity Chamber Yokuhlola Ikhwalithi Yemikhiqizo
Ilungele ukuhlola ikhwalithi yemikhiqizo efana nogesi, izinto zikagesi, omakhalekhukhwini, ezokuxhumana, amamitha, izimoto, imikhiqizo yepulasitiki, izinsimbi, ukudla, amakhemikhali, izinto zokwakha, ukunakekelwa kwezokwelapha, i-aerospace, njll.
DRK-LRH Biochemical Incubator Series
Ngokupholisa nokushisisa umsebenzi wokulungisa izinga lokushisa eliqondiswa kabili, okudingekile ocwaningweni lwesayensi, amakolishi namanyuvesi, ukukhiqiza noma amalabhorethri omnyango kubhayoloji, ubunjiniyela bezakhi zofuzo, umuthi, ezempilo nokuvimbela ubhubhane, ukuvikelwa kwemvelo, ezolimo, njll.
I-Constant Temperature Water Bath
1. Sebenzisa i-304 yensimbi engagqwali, imbobo ye-beaker ingashintshwa ngosayizi.2.Isikrini sokubonisa esijwayelekile sedijithali, isikhombimsebenzisi sokusebenza sohlobo lwemenyu, Kulula ukusiqonda nokusebenza.
Isithando somlilo se-muffle siwumshini wokushisa wendawo yonke, ongahlukaniswa phakathi kwesithando somlilo sebhokisi, isithando somlilo se-tube kanye nesithando somlilo esishisayo ngokusho kokubukeka kwaso.